Jikọọ Audiense: Kachasị elu Twitter Marketing Platform for Enterprise | Martech Zone
Jikọọ Audiense: Kachasị elu Twitter Marketing Platform maka Enterprise
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụwa anabatala ọwa mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ, m nọgidere na-abụ onye na-akwado Twitter. Na Twitter na-aga n'ihu na-enyere aka na-ebugharị okporo ụzọ na saịtị nke m na nke ọkachamara ka m ghara ịhapụ ya n'oge na-adịghị anya!
Njikọ Audiense bụ ikpo okwu wuru maka ụlọ ọrụ Twitter Marketing na ntụkwasị obi nke ọtụtụ puku ụdị na ụlọ ọrụ gburugburu ụwa:
Nchịkwa na nyocha obodo - Nweta ozi ziri ezi gbasara obodo gị na Twitter. Mara ndị na-eso ụzọ gị nke ọma ma soro ha rụọ ọrụ nke ọma
Chatbots & Mgbasa ozi - Site na onye na-ewu Chatbot Connect's, ị nwere ike ịmepụta ngwa ngwa optbot na ntanetị ole na ole. Soro ndị debanyere aha gị / ndị ahịa gị ozugbo.
Nlekota oru & Ntinye - Mkpuchi zuru oke zuru ụwa ọnụ nke ezigbo oge na akụkọ ihe mere eme (ebe ọ bụ na 2006) ọdịnaya Twitter. Audiense na-enye mkparita uka mkparita uka na imeghari otu mgbasa ozi.
Twitter Ejiri Ndị Na-ege Ntị maka Mgbasa Ozi - Mepụta ndị Twitter emebere nke ọma na ahịa. N'agbanyeghị otu niche ma ọ bụ sara mbara bụ ndị ị na-ege ntị. Na-arụ ọrụ mgbe niile na akaụntụ Mgbasa ozi Twitter gị.
Atụmatụ Audiense Jikọọ
Oge kacha mma iji Tweet - Chọpụta mgbe oge kachasị mma iji tweet bụ ma jiri uru ọ bụla ị zigara. Nweta oge kacha mma site na ngwa ọdịnala nke ndị ọrụ wee mụta mgbe ndị na-ege gị ntị nọ n'ịntanetị.
Chọgharịa Obodo Twitter gị - Nweta ozi ziri ezi gbasara obodo gị site na njirisi dị iche iche, mata ndị na-eso ụzọ gị nke ọma ma soro ha rụọ ọrụ nke ọma. Kpido ha ma gbasaa ozi nke Twitter.
Twitter Filter, Soro, na Mee - Chọpụta ndị na - eso ụzọ ọhụrụ gị ma soro ha n’azụ. Mara ihe ma nwee nkwanye ugwu. Nyeghachi ndị na-esonụ ma ọ bụrụ na ọ bụ iwu gị. Chọpụta ndị enyi na-eme mkpọtụ, ndị nwere ike ịme spam, na ndị ọrụ anaghị arụ ọrụ. Biko rụtụ aka na Twitter iwu na atumatu.
Nnyocha Asọmpi Twitter - Tụlee na akaụntụ Twitter ndị ọzọ ma ọ bụ ndị asọmpi ka ị wee hụ onye nwere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ yana ndị ha bụ, ndị na-agbakwunye karịa, ihe ha na-ekwukarị banyere wdg.
Ndị na-ege ntị na Twitter na nghọta obodo - Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata ogo nke obodo Twitter gị nke a bụ akụkọ zuru oke: eserese mpaghara oge, eserese asụsụ, ndị ọrụ site na ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ, ndị ọrụ site na ọrụ ndị na-adịbeghị anya, wdg.
Jikwaa ndepụta Twitter - Hazie ndị na-eso ụzọ gị na ndị enyi gị site na ịmepụta ndepụta Twitter. Soro ndị dị mkpa banye n'ụzọ dị mma maka nkwukọrịta.
Nchịkwa Iwu akpaaka Twitter - Chekwaa oge site na ịmepụta iwu na-akpaghị aka mgbe mmadụ gbasara gị. Iji maa atụ: zitere gị ozi email ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ihe karịrị mmadụ iri abụọ na-eso ụzọ soro gị. Smart, nri?
Twitter Direct Message Chatbots na Mgbasa Ozi - Site na onye na-ewu Chatbot Connect's Connect, ị nwere ike ịmepụta optbot na chatbot na ntanetị ole na ole ma soro ndị debanyere aha ma ọ bụ ndị ahịa soro Twitter na-eji Direct Ozi na-akpaghị aka.
Nyochaa Tweet - Mejuputa Nchịkọta n'efu nke Twitter na-enye nghọta zuru oke banyere onye na-etinye aka na tweets gị kacha mma. Tinye ha na ndeputa ha, ma obu lekwasi ha anya na ndi mmadu ndi mmadu na Twitter.
Nkwupụta Mgbasa Twitter - Chọta ebe ụzọ bara uru ma ghọta mmekọrịta dị n’etiti ndị na-ege ntị iji nweta ọgụgụ isi ịkwesiri ilekwasị anya na ndị na-ege ntị. Hụ otú atụmatụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya si dị irè ma hụ otu akụkọ sitere na mpaghara ahịa ndị yiri ya nwere ọnụọgụ ndị ọrụ yiri ya.
Nkwupụta Mgbakwunye Twitter - The Affinity Report na-enye ụzọ nlere iji ghọta nke ọma ihe ndị na-ege gị ntị na-eme ka ị mata mkpebi nke ọma gbasara ọdịnaya ga-eme n'ọdịnihu nke ga-adabara ma soro ndị na-ege ntị. Gbaa akụkọ gbasara mmekọrita iji hụ ndị na-ege ntị na-esokarị na Twitter.
Twitter Advanced Nlekọta Ndị Nlekọta - Mee ngwa ngwa na enweghị ike jikọta nhọrọ nzacha nke profaịlụ onye ọrụ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na ọrụ onye ọrụ iji mepụta ndị mmadụ ahaziri nke ọma nke na-eme ka mkpa Twitter na Mgbasa Ozi Organic dị mkpa.
Nyochaa Twitter - Mkpuchi zuru oke zuru ụwa ọnụ nke ezigbo oge na akụkọ ihe mere eme (ebe ọ bụ na 2006) ọdịnaya Twitter. Audiense na-enye mkparita uka mkparita uka na imeghari otu mgbasa ozi.
Twitter Ejiri Ndị Na-ege Ntị - Mepụta ndị Twitter emebere nke ọma na ahịa. N'agbanyeghị otu niche ma ọ bụ sara mbara bụ ndị ị na-ege ntị. Na-arụ ọrụ mgbe niile na akaụntụ Mgbasa ozi Twitter gị.
Gbalịa Njikọ Audiense
Tags: ọhaaudiense jikọọoge kacha mma iji tweetnyocha tweetTwittermgbasa ozi twitterAkụkọ mmekọrita twitternyocha twitternjikwa ndị na-ege ntị twitterAkpaaka Twittertwitter chatbotnghọta obodo twitterNjikwa obodo twitternyocha onye nyocha twitterdashboard twittertwitter ozi ziri ezi bottwitter ozi ziri ezi chatbottwitter soroakụkọ mgbasa ozi twitternjikwa ndepụta twitternlekota twitteriwu nzaghachi twitteriwu twittertwitter ahaziri ndị mmadụTwitter unfollow
Gba Jetpack metụtara ya na ụbọchị ole na ole
Mkpa njikọta ọnụ maka ndị na-ere ahịa na mkpọchi